မာစတာသေနတ်ပစ် FPS (FPS Shooting Master) - 2Game
Buy နဲ့ upgrade သင့်ရဲ့လက်နက်တွေနှင့်ဤစနိုက်ပါစစ်တိုက်ရာတွင်ပူးပေါင်း!
လက်ဖြောင့်ရိုင်ဖယ်သေနတ်များ, ချေမှုန်းရေးရိုင်ဖယ်, ရိုင်ဖယ်, ပစ္စတိုနဲ့အထူးလက်နက်များအပြင်; သငျသညျစျေးပေါသေနတ်များလည်းခိုင်ခံ့ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဦးစားပေး, အဆိုအရသင့်ရဲ့လက်နက်တွေ upgrade နိုင်ပါတယ်မျှအင်အားအကောင်းဆုံးလက်နက်ကိုသာပိုမိုအားကောင်းလက်နက်များရှိ၏။
ဤနေရာတွင်အဆုံးမဲ့လုပ်ကြံခံရမစ်ရှင်ရှိပါတယ်။ အထူးတပ်ဖွဲ့များစနိုက်ပါအဖြစ်, သင်အန္တရာယ်မစ်ရှင်ဖြည့်စွက်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်အတွက်အနားတွင်ပုန်းဖို့လိုအပ်; သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာသို့မဟုတ်ရာဇဝတ်ကောင်ပြစ်မှုများအောင်ရှေ့တော်၌နှိမ့်ချခေါက်;
နေ့စဉ်အလုပ်များအပြင်, အရေးတကြီးဓားစာခံများကယ်ဆယ်ရန်သင့်အားလိုအပ်ကြောင်းရံဖန်ရံခါအထူးအကျပ်အတည်းဖြစ်ရပ်များရှိပါသည်။ သင့်ရဲ့လက်ဖြောင့်ရိုင်ဖယ်နှင့်အတူ Start!
အဆိုပါဂိမ်းကစားသမားအခင်းဖြစ်ပွားရာပေါ်မှာရှိနှင့်ချထားရန်ခွင့်ပြုပြောင်းလဲနေသောရာသီဥတုသက်ရောက်မှု, လက်တွေ့ပဲ့ထိန်းတပ်ခြင်း simulation ကိုစစ်မြေပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ သင်တစ်ဦးကျည်ဆံ shoot ယခုအချိန်တွင်ခုနှစ်, လက်ရာမြောက်သောကျည်ဆံသက်ရောက်မှုဿုံသင့်ရဲ့အံ့သြဖွယ်ရိုက်ချက်မျိုးပွားမည်!
> အဘယ်သူမျှမ network ကိုလိုအပ်သည်:
play ဖို့ဘယ်လိုကစားရန်မည်သို့မျှမ Wi-Fi မရှိပြဿနာ, အချိန်မရွေး, ဘယ်နေရာမှာမဆို, ရန်သူရိုက်ကူးများ၏စိတ်လှုပ်ရှားပျော်မွေ့, ဒီစနိုက်ပါစစ်အတွက် join, မည်သည့်ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲဂိမ်းအဆင့်ဆင့်ရာပေါင်းများစွာ,!
နယူး 3D ဂိမ်းမျက်နှာပြင်မရှိကွန်ရက် click နှိပ်ပြီး play!
Android အတွက် မာစတာသေနတ်ပစ် FPS (FPS Shooting Master) အလွန်ရေပန်းစားသည်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဂိမ်းကစားထောင်ပေါင်းများစွာ၏မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမပါဘဲရဖို့အတှကျဝမျးသာပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်ကူညီနိုငျပါသညျ! အခမဲ့ဂိမ်းကို download လုပ်ပါရန်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သောဖိုင်ကိုရွေးသင် file ကိုရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ မာစတာသေနတ်ပစ် FPS (FPS Shooting Master) apk download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှငျ့သငျတက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်းများအတွက်ဂိမ်းအပြည့်အဝဗားရှင်းခံစားကြသည်! မိုဘိုင်းဂိမ်းကိုခံစားဖို့အကောင်းဆုံး gadgets တစ်ခုမှာ iPhone ကိုဖြစ်ပါသည်, မာစတာသေနတ်ပစ် FPS (FPS Shooting Master) iOS အတွက်ထိပ်တန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်ကစားရန်သင့်ကိုကူညီနိုငျပါသညျ! iPhone အတွက် မာစတာသေနတ်ပစ် FPS (FPS Shooting Master) ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိရိယာ၏မော်ဒယ်ကို select ရန်သင့်အားအကြံပြု, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကအသင့်တော်ဆုံးဂိမ်း app များကိုရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သော .ipa ဖိုင်ကိုရွေးသင်ကစားပွဲရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ မာစတာသေနတ်ပစ် FPS (FPS Shooting Master) ကို download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှင့်သင်အိုင်ပက်သို့မဟုတ်, iPod တို့အတွက် မာစတာသေနတ်ပစ် FPS (FPS Shooting Master) ခံစားနေကြသည်။ ထိုအသတိရ! ကျနော်တို့နေ့စဉ်အခမဲ့ IPA ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကို update ဒါညှိနေဖို့!